ब्रेकिङ्ग न्युज : सुनसरिबाट आयो दुखद घटना, आधा दर्जन गाउँ डुबानमा, दर्जनौ परिवार बिचल्ली - info4nepal
ब्रेकिङ्ग न्युज : सुनसरिबाट आयो दुखद घटना, आधा दर्जन गाउँ डुबानमा, दर्जनौ परिवार बिचल्ली
ranjan7months ago No Comments
विभिन्न नदी तथा खोलामा आएको बाढीले सुनसरीका कैयौँ बस्ती डुबानमा परेका छन् ।
सुनसरी खोलाको बाढीले तीन स्थानीय तहका आधा दर्जन बस्ती डुबानमा परेको स्थानीयवासीले जनाएका छन् । सुनसरीको सुनसरी खोला, गडन खोला, बूढी खोलासहितका विभिन्न नदी तथा खोलामा आएको बाढीका कारणले आधा दर्जन बस्ती डुबानमा परेका हुन् ।
डुबानका कारण निर्माण सामग्री, बाली र अन्य सामग्रीमा गरी करोडौँको क्षति भएको स्थानीयले बताएका छन् । बाढीका कारण इनरुवा–१०, जल्पापुरमा हाटसेट निर्माणका लागि राखिएका विभिन्न सामानसहित निर्माणका सामग्री बगाएको छ भने मरिया खोलाको बाढीले डुबानमा पारेको छ ।
खोला आसपास क्षेत्रका लहरे र तरकारी बालीमा समेत नोक्सानी पुगेको छ । जल्पापुर मुस्लिम निर्माणका सञ्चालक ऐयुव मियाँका अनुसार ६० बोरा सिमेण्टसहितका विभिन्न निर्माण सामग्री र मजदूरका खाद्यान्न तथा तरकारी बाली गरी गाउँमा करोडौंको क्षति भएको छ ।
स्थानीयवासी तथा ठेकेदारसमेत रहेका ऐयुव मियाँले डुबानका कारणले जनजीवनसमेत धेरै प्रभावित भएको जानकारी दिए ।
बाढीको कारणले जिल्लाको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–७, नरसिंह टाप्पुको दलित बस्ती डुबानमा परेको छ । नरसिंहको दास टोल र सुकुम्बासी टोलका गरी १०० परिवार डुबानको चपेटामा परेका छन् ।
स्थानीय जगदीश यादवका अनुसार नरसिंह क्षेत्रमा डुबानका कारणले केही परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केहीलाई घरमा भान्सा गर्ने अवस्थासमेत नरहेको यादवले बताए । सुनसरी खोलाको किनारमै रहेको बस्तीका धेरै घर डुबानमा रहेको स्थानीय चन्देश्वर मण्डलले जानकारी दिए ।
मण्डलका अनुसार बुधबारदेखिको वर्षाका कारणले आफ्नो गाउँमा बाढी आएको र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हो ।
उता हरिनगर गाउँपालिका–७ घुस्की का साथै वडा नं २ र ४ मा समेत मरिया खोलाको बाढीले सयौँ घर डुबानमा परेको स्थानीय अब्दुल कैयुम खाँले जानकारी दिए । मरिया र सुनसरी खोलाको बाढीले १२० घर डुबानमा परेको खाँले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीले भने समेत बाढी आएको तर हालसम्म कुनै धनजनको क्षतिको विवरण नआएको बताएको छ । नदी र खोला आसपासमा भने सतर्कताका साथ बस्न आग्रह गरेको सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैबीच अबिरल वर्षाका कारण सुुनसरी खोलामा आएको बाढीले हरिनगरा—बसन्तपुर जोड्ने बाटो पूर्णरुपमा अवरुद्घ भएको छ । सुनसरी खोलाको पानी मोरिया खोलामा मिसिएपछि बाटो पूर्णरुपमा अवरुद्घ भएको हो । बाटो अवरोध भएपछि हरिनगरा मावि र वासुदेव एकेडेमीमा अध्ययनरत बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् ।
बाढीका कारण पहिलो त्रैमासिक परीक्षा दिनबाट समेत बालबालिका वञ्चित भएको स्थानीयवासी सरोज मण्डलले जानकारी दिए ।
अनलाइन खबर बाट
३५ लाखको काठे पुल, देशको ढुकुटी जति घुसखोरी र माफियाको हातमा
ranjan July 18, 2018
अशोक दर्जीको मलेसियाको प्रस्तुती पनि ट्रेन्डिगंमा, केही घण्टामा नै लाखौँ बढीले हेरे भिडियो
ranjan June 22, 2018
कांग्रेसले गर्दा हामीले बृद्धभत्ता बढाउन सकिएन : प्रधानमन्त्री केपी ओली
ranjan July 1, 2018
जय मनकामना माता ! जान्नुहाेस तपाइकाे अाज
ranjan June 10, 2018
प्रचण्डले भने, हिन्दु धर्म सामन्तहरुको हो, कम्युनिस्टको धर्म क्रिस्चियन हो (भिडियो सहित)
ranjan April 16, 2018
भर्र्खरै काठमाण्डौको बालाजु मा–घट्यो अर्को डरलाग्दो घट्ना
ranjan August 6, 2018
मा चिकित्सा क्षेत्रमा फर्कने समाचार गलत हो : पूर्व राष्ट्रपति
५ कक्षा फेल डाक्टर र दर्ता नै नभएका मेडिकलबारे सनसनीखेज भिडियो
गगन थापा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री बन्दै – कांग्रेसको भबिस्य चम्किने निश्चित
कांग्रेस प्रवेश गर्नेको लर्को ह्वात्यै बढ्यो- मेलमिलाप दिवसकै दिन सल्यानमा पुर्व एमालेका नेताले गरे नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश
विमान खरिद मा कंसाकारले तीन अर्ब ८८ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर, सरकार मौन? सक्दो शेयर गरौ कडा कारवाहीको माग गरौ
खुसीको खबर : गगन थापा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री बन्दै – कांग्रेसको भबिस्य चम्किने निश्चित
क्रिश्चियनको प्रचारमा लागेको भन्दै कांग्रेसले संसदमै नंग्यायो महरालाई
प्रचण्डकी बुहारी एवं मन्त्री बिना मगरले पाँच करोड कमिशन नपाएपछि बिग्रियो कुरा
रबि लामिछानेलाई जेल हाल्ने तयारीमा मुकुन्दे – हेर्नुस भिडियो मुकुन्देको टाउको काट्ने लाइ ३ लाख इनाम
केपी ओलीकै गृहजिल्लामा लज्जास्पद हार भयो कम्युनिस्टको, कांग्रेसको सानदार जीत !!
गगन थापाले हामि कम्युनिस्टको कर्तुत सबै खोलिदिन्छन, त्यै भनेर बोल्न नदीएको हो , भनेर स्वीकार्नुस सभामुख ज्यु
सभामुख महरालाई गगन थापाले मोबाइलमै देखाए समय!, भिडियो